Dallada JUNSAA oo kulan la qaadatay ururrada bulshada rayidka ah ee Jubaland | Jubbaland Media Online
Dallada JUNSAA oo kulan la qaadatay ururrada bulshada rayidka ah ee Jubaland
Posted on July 6, 2017 in Feat, Wararka // 1 Comment
Dalladda daneeyeyaasha aan dowliga ahayn ee Jubaland ee magaceeda loo soo gaabiyo JUNSAA ayaa xafiiskooda magaalada Kismaayo ku qaabilay qaar kamid ah ururrada bulshada rayidka ah ee Jubaland.
Kulankan oo ahaa mid dallada iyo ururrada bulshada rayidka ah uga wada hadlayeen sidii loo wada shaqeyn lahaa islamarkaana talooyin looga dhageeysanayay xubnihii ka socday ururrada bulshada rayidka ah ayaa waxaa ka qeybgalay masuuliyiin ka socotay Ururrada dhalinyarada, Haweenka, odoyaasha dhaqanka, saxaafadda iyo aqoonyahannada Jubaland.
Madaxda dallada ayaa ururrada ugu baaqay in ay iska soo diiwaangeliyaan dallada, islamarkaana ay wada shaqeyn toos ah la yeeshaan xafiiska.
Masuuliyiintii ka qeybgalay ayaa dhammaantood bogaadiyay Dallada JUNSAA ayagoo sheegay in ay kusoo xirmi doonaan xafiiska islamarkaana ay sida ugu dhaqsaha badan isku soo diiwaangelin doonaan.
Afhayeenka Salaadiinta Jubaland Ugaas Cumar Xiireey oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan dallada Junsaa, isagoo xusay in hadda wixii ka danbeeyo ay dhamaatay isla xisaabtan la’aantii iyo weliba hay’adihii sida qarsoodiga ah uga shaqeynsan jiray Jubaland.
Gudoomiyaha ururka haweenka Jubaland Marwo Batraan Muxumed C/dulle ayaa sheegtay in cid walba oo dooneeysa in ay lasoo xiriirto ururrada bulshada rayidka ah ay hadda wixii ka danbeeyo usoo mari doonto dallada JUNSAA, ayadoo intaa ku dartay in dalladani ay tahay mid matasha dhammaan ururrada bulshada rayidka ah ee ka dhisan Jubaland.
1 Comment on Dallada JUNSAA oo kulan la qaadatay ururrada bulshada rayidka ah ee Jubaland
Cabdullahi sheekh Shaafici // July 9, 2017 at 8:34 pm // Reply
JUNSAA waxyaabaha ugu horreeya ee looga fadhiyo waxaa ka mid ah:1. U ololaynta xuquuda bulshada madamiga gaar ahaan dhanka deeqaha waxbarashada, caafimaadka, daryeelka, deegaanka iyo u adeegista baahida shacabka.2. In la dagaallanka afkaarta qaloocan iyo caadooyinka qabyaaladda.3. Wacyigelinta bulshada ee nabadda iyo wada noolaanshaha.4. Tirtirista iyo ka gudbidda wixii loo yaqaaney KOONFURTA & BARTAMAHA SOOMAALIYA oo hadda ah 4 dawlad goboleed iyo gobolka banaadir.5. Qaadista xayiraadda saaran guud ahaan JSS gaar ahaanna Kismaayo oo ku sugan (heerka 5aad) level 5 taas oo la saaray 2002 waa xagga hay’adaha QM ee Soomaaliya ka shaqeeya.sidoo kale waa in JUNSAA la xisaabtanto dawladda siiba wasaaradaha ay ka jirto loolanka qabiilka sida wasaaradda caddaaladda, dastuurka iyo arrimaha diinta JSS, Booliiska iyo garsoorka.